देशभर थप यति धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या कति ? — Imandarmedia.com
देशभर थप यति धेरै जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, मृत्यु हुनेको संख्या कति ?
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २,३२८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ५,८३७ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा १५२७ र ४२९६ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ८०१ जना गरी २,३२८ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
पछिल्लो २४ घण्टामा ३,०६६ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने १९ जनाको मृत्यु भएको छ । हाल कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या २७ हजार ७१६ जना रहेका छन् । तीमध्ये २४ हजार ६७५ जना होम आइसोलेसनमा र ३०४१ जना होम आइसोलेसनमा छन् ।
कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण कम हुँदै गएको भनी काठमाडाैं उपत्यकाभित्र लगाइएको निषेधाज्ञा निकै खुकुलो पारिएका बेला सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा भने उल्लेख्य कमी भने आउन नसकेको सरकारी विवरणले देखाएको छ।
गत हप्तादेखि उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई निकै खुकुलो पारिएको थियो। गत मङ्गलवारदेखि त निषेधाज्ञा त्यसभन्दा पनि अझ खुकुलो भएको छ। तर उपत्यकाभित्र सङ्क्रिय सङ्क्रमितको सङख्यामा भने खासै धेरै कमी नआएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याको विवरणमा देखिन्छ।
यद्यपि त्यो सङ्ख्या घट्दो क्रममा रहेको छ। काठमाडाै., ललितपुर र भक्तपुर तीन जिल्लामा गरी शनिवार कुल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७९५५ रहेको छ।
उपत्यकामा जोरबिजोर प्रणालीमा निजी सवारीसाधन चलाउन दिन सुरु गरिएको अघिल्लो दिन १० हजारभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेका थिए। त्यसमा क्रमश: कमी आउँदै गएको सरकारी विवरण देखाएको छ।
तर उपत्यकाभित्र अहिले चहलपहल धेरै हुन थालेको र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने क्रममा कमी देखिएकाले त्यसले पुन: सङ्क्रमण बढ्नसक्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविद्हरूको छ।
एकजना जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, “काठमाडाैंमा सबैतिरका मानिसको ओहोरदोहोर भइरहेको छ। यहाँ पनि भिडभाड बढेकाले सङ्क्रमण भइ रहेको छ।”
उनी पछिल्ला दिनमा कन्ट्याक ट्रेसिङ पनि हुन छाडेकाले ८ हजारमाथि सक्रिय सङ्क्रमित रहेको काठमाण्डू उपत्यकासहित देशैभरि विशेष सावधानी अपनाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन्।
अबको पाँच महिनामा नेपालले कहाँबाट कति खोप भित्र्याउँदै छ ?
सन् २०२१ भित्र नेपाललाई खोप विक्री गर्न नसक्ने अधिकांश खोप उत्पादक कम्पनीहरूले बताएकाले अर्को वर्षका लागि खोप खरिद गर्न प्रक्रियाहरू अघि बढाइएको स्वास्थ्य सेवा विभागका एक जना अधिकारीले बीबीसीलाई बताएका छन्।
चीनबाट खरिद गरिएको कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप आगामी साताबाट आपूर्ति हुन लाग्दा अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो। हालसम्म भारतको सीरम इन्स्टिच्यूट अफ इण्डियाले उत्पादन गरिरहेको अक्सफर्ड आस्ट्राजेनेकाको कोभिशील्ड खोप र चीनको सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको भेरोसेल खोप नेपालमा प्रयोग भइरहेको छ।
गएको माघ १४ गतेबाट खोप अभियान सुरु भएयता अहिलेसम्म नेपालको जनसङ्ख्याको लगभग ९ प्रतिशतले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको र ३ प्रतिशतले दुवै मात्रा खोप लगाएको बताइन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार आगामी असारको २४ गतेबाट निरन्तर रूपमा चिनियाँ खोपको आपूर्ति हुने जानकारी आफूले पाएको बीबीसीलाई बताए।
उनी भन्छन्, “जुलाईको आठ तारिखपछि प्रत्येक हप्ता जस्तै गरी खोपको आपूर्ति हुन्छ। एकैचोटि धेरै ल्याएर भण्डारण गर्नसक्ने हाम्रो क्षमता पनि छैन। अहिलेसम्म हाम्रो भण्डारणको जुन क्षमता छ त्यसको अत्यधिक प्रयोग हुने गरी खोप आउँछ र त्यो केन्द्रमा नै रहँदैन।”
उनले थपे, “सातवटै प्रदेशमा बाँडिन्छ र खोप वितरण सम्बन्धी पहिल्यै बनेको योजना अनुसार लक्षित समूहलाई खोप दिँदै जानेछौँ।” चीनबाट खरिद गरिएको खोपको परिमाण र मूल्यबारे सरकारले केही बताएको छैन।
तर कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख बालानन्द शर्माले ४० लाख चिनियाँ खोप (२० लाख जनसङ्ख्यालाई पुग्ने) खरिद गर्ने हिसाबले काम अघि बढेको केही दिनअघि बीबीसीलाई बताएका थिए। नेपालसँग केन्द्र र प्रदेशमा गरी लगभग २० लाख खोप भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको बताइन्छ।
यसअघि नेपाललाई चीनले १८ लाख मात्रा भेरोसेल खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। अहिलेको खरिदबाहेक चीनबाट नेपालले थप खोपहरू सन् २०२१ भित्रै भित्र्याउन सक्छ कि सक्दैन त्यो प्रस्ट छैन।
स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलका अनुसार चीनबाट खोप आएपछि विपद् प्रभावित जिल्ला सहितका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर खोपको वितरण गरिनेछ।